Iinkqubo zePebble Beach System zibhengeza iziphumo zeMali zeNqanaba lokuqala le-2019 -i-NAB bonisa iiNdaba ngeNsasazo yeBeat, Umsasazi waseburhulumenteni weNAB Show-NAB BONISA uLUPHE
ikhaya » iindaba » Iinkqubo zePebble Beach zibhengeza iziphumo zeMali kuNyaka wokuqala we2019
Iinkqubo zePebble Beach zibhengeza iziphumo zeMali kuNyaka wokuqala we2019
I-Weybridge, e-UK, ngoSeptemba 10th, 2019 - IiPebb Beach Beach Systems, i-automation ekhokelayo, ulawulo lomxholo kunye nengcali edibeneyo yesitishi, ikhuphe iseti eneziphumo ezihle kakhulu kwiinyanga ezintandathu zokuqala ze2019 namhlanje.
Inkampani inike ingxelo yengeniso ye- $ 5.6m, ukunyuka kwe-51% xa kuthelekiswa namanani e-2018 ngoJanuwari ukuya kuJuni, kunye nokunyuka kwe-23% kwixabiso lee-oda ezifunyenwe kwangelo xesha. Ikwaxela phambi kwenzuzo yerhafu ye- $ 0.7m, xa kuthelekiswa nelahleko ye- $ 0.9m kwiinyanga ezintandathu zokuqala ze-2018, kunye nokunyuka okukhulu kohlengahlengiso lwe-EBITDA ukusuka kwi- $ 0.6m ukuya kwi- $ 2.0m.
Umphathi we-Pebble uPeter Mayhead uthe "Ndiyazidla ngokuya kumdlalo we-IBC walo nyaka uneziphumo ezininzi. Kucacile kum ukuba kulandela uhlengahlengiso oluyimpumelelo esithe sadlula kulo kwiminyaka edlulileyo, ngoku samkelwe njengomnye wabathengisi abazimeleyo abambalwa abazimeleyo kwibala lokudlala. Kwimalike yesiphithiphithi ekhathazwa kukudityaniswa, siyakhula kwaye sivelisa inzuzo ebalulekileyo esivumela ukuba senze utyalomali oluqhubayo kwi-R & D yethu. Sincinci kwaye sigugile kwaye sibekwe ngendlela eyodwa ukunceda ukucacisa ikamva lale ndawo ibaluleke kakhulu kushishino losasazo. "
UJohn Varney, onguSihlalo oLawulayo we- IiPebb Beach Beach Systems Iqela plc, uthe:
"Sikhuthazeke kakhulu ngeziphumo zenxalenye yokuqala ye2019. Ukuqala kwe2018, iBhodi ibeke isicwangciso sokucaphukisa sokujika iNkampani. Umsebenzi owenziweyo ngexesha le-2018 ubudingeka kwaye ucacisiwe kodwa, njengesiqhelo kwiimeko eziguqukayo, amanani esawenza ekupheleni konyaka, ngelixa sikhuthaza, khange abonakalise ubungakanani benkqubela phambili esiyenzileyo. Kuyavuyisa kakhulu ke ukuba ndikwazi ukunika ingxelo ngeseti elinomdla lezi ziphumo kwisiqingatha sokuqala se2019. Ezi ke zingumlinganiso omkhulu kumgangatho kunye nokusebenza nzima kwabantu abakweshishini. Ngelixa icandelo lokuqala lotshintsho lugqityiwe, indawo yentengiso esisebenza kuyo ihamba ngokukhawuleza kwaye inokhuphiswano kwaye ngelixa siphucule igama lethu kunye nendawo yethu yentengiso, kusekuninzi ekufuneka kwenziwe.
Ukujonga kwisiqingatha sesibini se2019 nangaphaya kokugxila kwethu kukuqhubeka nokwakha ukuphuculwa kwentsebenzo ethengiswayo kwi2018 kunye nokufumana amathuba kumathuba aziswe ziinguqu kwintengiso yosasazo.
IiPebb Beach Beach Systems izakuboniswa kwi-Stand 8.B68 e-IBC, kwaye ithathe inxaxheba kuMboniso we-IP kumagumbi i-E106 / 107 kwi-RAI. Iinkcukacha ezigcweleyo zeNgxelo yeNyaka yeNyaka inokufunyanwa Apha.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli i-subtitling, i-Digital Nirvana, uhlolo lweendaba, IBC TVU Networks Injini yeVidiyo	2019-09-10
Previous: Ukubonakala kweTV kuboniswa kweNethiwekhi yeLatency yayo ephantsi eneZitishi eziPhakamileyo zeMidlalo ye-IBC 2019
next: I-Post Core ihambisa i-Sky One's Brassic kwi-HDR ngeDaVinci Resolve